voavaha fiaramanidina fiaramanidina
11 volana 2 herinandro lasa izay #1203 by Fajlaz86
Manana fanontaniana aho.
I really like to play FSX, but some of downloaded airplanes are not visible because of some graphic trouble.
Nataoko sary ny fahoriako hahita. Ny marina, satria manana Windows 10 sy Direct x 11 aho?
Misy manoro hevitra ny fomba hamahana azy io? Tsy afaka mahita fiaramanidina toy ny A-340, A-330 ary maro hafa.
Misaotra olona, ​​izay manampy.
Manana zotra virtoaly mahafinaritra!
11 volana 2 herinandro lasa izay #1204 by raffa203
Hello, mila mila manidy ny "direct x10 preview" safidy ianao eo amin'ny sehatra
Fotoana mamorona pejy: 0.338 segondra